FRP Pultrusion Wasakh, dhinto doorsoon, Pultruded Profiles - Jinglong
FRP (Maro) Die Pultrusion
FRP (Maro) Pultruded Profiles
FRP Tube (Maro) Round
FRP Tube (Maro) Square
FRP (Maro) dhengedihii
FRP (Maro) Channel Steel
FRP (Maro) Xagasha Steel
FRP (Maro) I-dogob Steel
FRP (Maro) Profiles qaabeeya
FRP ningax isku xira
FRP (Maro) Flat Profiles
FRP (Maro) Profiles doorsoon
FRP (Maro) xayndaabka
FRP (Maro) sallaan ningax
FRP (Maro) dahaaran Saxaro sallaan
FRP (Maro) iyo shabaggeeda
Polymer caaga Splicing biruhu
FRP (Maro) wax taaj oo dhinta
FRP Pultrusion dhinta
FRP doorsoon Profiles
FPR wax taaj oo kale Die
FRP ningax sallaan Saxaro
Xinxiang Jinglong darka Qalabka Co., Ltd. oo la asaasay 1995. Waa shirkad ka go'an in R & D, design iyo processing of wasakhahaasi pultrusion FRP, dhinto doorsoon iyo profiles pultruded. Shirkadda daboolayaa meel ka mid ah in ka badan 5,000 oo mitir oo laba jibbaaran, iyo in ka badan 30 nooc oo qalab kala duwan mashiinka, xarumaha machining CNC oo baaxad weyn, mashiinada darane-sax sare, iwm, iyo sidoo kale qalabka baaritaanka kaamil ah. Waa teknoolojiyad sare ganacsi ilaalinta deegaanka ah oo ku takhasustay R & D, wax soo saarka, iibka iyo adeegga ee FRP.
go'an tahay tayada Product
· Habka wax soo saarka warshadaha iyo imtixaanka leeyihiin diiwaanka tayada iyo xogta imtixaanka.
· Wixii imtixaanka waxqabadka wax soo saarka, si daacad ah aan idin soo dhowayn in ay booqdaan shirkadda ee nidaamka oo dhan iyo kormeerka waxqabadka buuxa. Ka dib markii wax soo saarka la xaqiijiyay, waxaa la soo baakadeeyey doonaa iyo geeyey.
qiimaha Product go'an
· Si loo hubiyo isku halaynta sare iyo horumarinta ee badeecada, doorashada ee nidaamka isticmaalaa waxyaabaha brand tayada gudaha ama caalamiga ah.
· Under xaaladaha tartan la mid ah, Shirkadda siin doonaa qiimaha ugu wanaagsan ee qiimaha ugu wanaagsan ee aan yaraynta qaab farsamo ah ee badeecada iyo beddelo qaybo ka mid ah badeecada.
Delivery go'an tahay waqtiga
· Ilaa hadda sida ay suurtogal tahay sida ay shuruudaha macaamiisha, haddii ay jiraan shuruudo gaar ah oo u baahan in la dhamaystiro ka hor, shirkad noo gaar ah abaabuli karaan wax soo saarka iyo rakibidda, iyo ku dadaalaan in ay buuxiyaan baahida macaamiisha.
· Rogo oo Service: dhakhso ah, muhim, sax ah, maskax leh oo dhamaystiran.
· Gool Service: tayada Service Guuleystay qancinta macaamiisha.
· Mabda'a Service: Haddii ay jirto tayo aan caadi ahayn ama cabashooyin ka socda macaamiisha, Shirkadda xiriiri doonaa in hab wakhti iyo si fiican u xamili mabda'a ah macaamiisha ugu horeysay.
zone agglomeration Warshadaha, qaybta galbeed ee wadada renmin, magaalada xinxiang
Fiberglass Rectangular Tube, Profiles Flat qaabeeya, Customized Frp Gutter Cover Plate, Bolt U samaynta Machince, FRP Pultrusion dhinta, SMC wax taaj oo kale Die,